warbixintii ugu danbeysay COVID19 Ethiopia Laba qof oo dheeri ah oo tijaabo lagu helay # COVID19 24kii saac ee la soo dhaafay 2650 muunado shaybaar oo laga soo uruuriyay xarumaha karantiillada hudheellada iyo kuwa aan hoteel ahayn, bulshada, la xiriir raadinta iyo tas-hiilaadka caafimaadka.
Tani waxay ka dhigeysaa wadarta guud ee la xaqiijiyey ee Itoobiya 263 ka ah labadooduba waa rag Itoobiyaan ah oo da’doodu u dhaxayso 24 iyo 33 oo labadooduba waxay leeyihiin taariikh socdaal dibedda. Mid wuxuu ka socdaa #Tigray xarunta karantiil gobolka & darawal xamuul xuduudeed kan kalena wuxuu ka socdaa #Jigjiga, xarunta karantiiliga ee gobolka #Somali.
Laba bukaan oo dheeri ah ayaa sidoo kale soo kabsaday iyagoo tirada bukaannada soo bogsaday gaadhay 108. Ma jiraan bukaanno ku jira ICU xilligan halka 148 bukaan ay joogaan cusbitaalka Eka Kotebe.
Itoobiya ilaa iyo hadda waxay sameysay 41, 689 tijaabooyin shaybaar.
2 qof oo dheeri ah ayaa sidoo kale soo kabsaday isagoo ka dhigey lambarka kasoo kabashada illaa 108.
Next articleSoomaaliya ma dhammaystirna inta ay maqanyiha tahay Somaliland.R.khayre
Wasiirka xidhiidhka Goleyaasha oo ka Jawaabay Hadalo ka Soo Yeedhay Xisbiyada...